Somaliland: Abaar saameysay 80,000 oo qoys
Photo | Keydka sawirrada/Gaarane/Ergo
Radio Ergo 02 February, 2016 SOMALILAND
(ERGO) - Dad lagu qiyaasay 80,000 oo qoys oo u badan xoolo-dhaqato ayay saameysay abaar ka jirta deegaanno ka tirsan gobollada Awdal, Togdheer iyo Waqooyi-galbeed ee Somaliland oo labo sano oo xiriir ah aanu ka di’in roob. Xoolo badan ayaa dhintay, meelaha qaarna biyo yari ayaa laga soo sheegayaa.
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Dabiiciga ah ee Somaliland, Maxamed Muuse Cawaale ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in qoysaska ay abaartu saameysay aysan haysan cunto ku filan, xoolahoodana ay u dhimanayaan daaq iyo biyo la’aan. “Carruurta qoysaskaas oo qaarkood ay nafaqo-darro ku dhacday waxay halis ugu jiraan inay u dhintaan macaluul,” ayuu yiri.
Guddoomiyaha ayaa xusay inuu arkay dad badan oo ku ceyrtoobay abaarta oo uu ka mid yahay nin lahaa 30 neef oo lo’ ah oo hadda uu u haray hal neef oo keliya. “Ma hayno tirada saxda ah ee xoolaha dhintay, sababtoo ah xoolaha qaar waxay ku dhinteen waddada intii ay hayaanka ku jireen xoolo-dhaqatada oo aaday deegaanno kala duwan.” ayuu yiri.
Xoolo-dhaqato hayaan ah ayaa gaaray tuulooyin Hargeysa u jira 164 km oo hoos taga deegaanka Daarasalaam. “Dadka tuulooyinkan soo gaaray waxaan ku qiyaasi karaa 15 kun oo qoys,” ayuu yiri xoghayaha maamulka deegaanka, Fu’aad Sheekh Ibraahim oo Raadiyo Ergo u sheegay in raashin aan badneyn ay u qeybiyeen dadka abaarta ka soo cararay.
“Intii aan waddada ku soo jirnay shan cisho waxba ma aynaan cunin,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Biixi oo ka soo hayaamay tuulo lagu magacaabo Cabdisamad oo 62 km dhinaca koonfur-galbeed uga beegan Hargeysa. Deegaankiisa wuxuu ka mid yahay meelaha ay abaartu sida aadka ah u saameysay. “Nolol ayaad meel ku tegi doontaan isma lahayn gaajada na haysay darteed,” ayuu yiri. Wuxuu sheegay 33 neef oo lo’ ah oo uu soo hayaansaday ay gaajo darteed meel dhexe uga soo dhinteen. Wuxuu degmada Daarasalaam la yimid 22 neef oo lo’ ah oo xoolihiisii uga haray.
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka ayaa sheegay in abaarta oo sii baaheysa ay soo billaabatay bishii Agoosto ee sanadkii hore. Wuxuu ka digay in ay xaaladdu ka sii dari karto haddii uu roobka Gu’ga di’i waayo bilaha soo socda ee Maarso iyo Abriil. Isagoo hay’adaha samafalka ka codsaday inay u soo gurmadaan dadka ay saameysay abaarta.
Qiimeyn ay Gu`gii sanadkii hore sameysay waaxda Falanqeynta Cunno-Yarida iyo Nafaqada ee FSNAU ayaa lagu shaaciyay in 162,000 oo qof oo ku nool Somaliland ay u baahan yihiin gargaar bani’aadannimo, sida lagu daabacay warbixin ay 26-kii bishii hore ee Jannaayo soo saartay Hay`adda Arrimaha Bani`aadannimada Qaramada Midoobay ee UNOCHA.
(Warda Axmed Rooble/AT)